ကလေး ၁၇ယောက်မှာ ၁၅ယောက်လောက်က သူတို့မသိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နောက်ကို လိုက်တတ်တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? - Chit MayMay
Home Child Care ကလေး ၁၇ယောက်မှာ ၁၅ယောက်လောက်က သူတို့မသိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နောက်ကို လိုက်တတ်တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ?
၂၀၁၉ နွေရာသီက “Lisa Alert” လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ ရုရှားနိုင်ငံ ဆာရာတိုဗီမြို့မှာ လူမှုရေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃နှစ်နဲ့ ၁၂နှစ်အကြား ကလေးတွေကို (မိဘတွေဆီက ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ယူပြီး) သူစိမ်းတွေနှင့်အတူ ကစားကွင်းမှာ ထားခဲ့ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုမှာ ကလေး ၁၇ယောက်ထဲက ၁၅ယောက်လောက် သူစိမ်းကို ယုံကြည်ခဲ့ပြီး အသက် ၂နှစ်နဲ့ ၆နှစ်ကလေးသာလျှင် ကစားကွင်းမှ ထွက်ခွာဖို့၊ လိုက်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၉ ေႏြရာသီက “Lisa Alert” လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဟာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ဆာရာတိုဗီၿမိဳ႕မွာ လူမႈေရးစမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၃ႏွစ္နဲ႔ ၁၂ႏွစ္အၾကား ကေလးေတြကို (မိဘေတြဆီက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး) သူစိမ္းေတြႏွင့္အတူ ကစားကြင္းမွာ ထားခဲ့ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈမွာ ကေလး ၁၇ေယာက္ထဲက ၁၅ေယာက္ေလာက္ သူစိမ္းကို ယုံၾကည္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၂ႏွစ္နဲ႔ ၆ႏွစ္ကေလးသာလွ်င္ ကစားကြင္းမွ ထြက္ခြာဖို႔၊ လိုက္ဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကပါတယ္။
Previous articleမိခင်နို့တိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့ အကြံပြုချက် (၇)ခု
Next articleမိခင်နှင့် ကလေးအတွက် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ